Maitiro Ekuyera iyo ROI yeYako Vhidhiyo Kushambadzira Campaigns | Martech Zone
Kugadzirwa kwevhidhiyo ndeimwe yeaya marongero ekushambadzira ayo anowanzo kuverengerwa pasi kana zvasvika kune ROI. Vhidhiyo inomanikidza inogona kupa chiremera uye kutendeseka kunosimudzira chiratidzo chako uye kusundira tarisiro yako kuchisarudzo chekutenga. Heano mamwe eanoshamisa manhamba ane hukama nevhidhiyo:
Mavhidhiyo akaiswa mukati mewebsite yako anogona kukonzera kuwedzera kwe80% mumatengo ekushandurwa
Maemail ane vhidhiyo ane 96% yakakwira yekudzvanya-kuburikidza chiyero kana ichienzaniswa neasina-vhidhiyo maemail
Vhidhiyo vatengesi vanowana 66% yakawanda inokwanisika inotungamira gore rega
Vhidhiyo vatengesi vanonakidzwa ne54% kuwedzera mukuziva kwechiratidzo
83% yeavo vanoshandisa vhidhiyo vanotenda kuti vanowana yakanaka ROI kubva mairi ne82% vachitenda iri zano rakakomba
Mamwe mabhizinesi madiki nepakati nepakati ari kupinda muchikepe ne55% vachigadzira vhidhiyo mumwedzi gumi nembiri yekupedzisira
Imwe Zvigadzirwa yakagadzira iyi yakazara infographic, Kuyera ROI pane Vhidhiyo Kushambadzira Campaigns. Iyo inotsanangudza metric iwe aunofanirwa kunge uchiongorora kuvandudza yako vhidhiyo kushambadzira ROI, kusanganisira maonero ekuverenga, Kubatana, mwero wekushandurwa, social sharing, zvaunofunga, uye mari yakakwana.
Iyo infographic inotaura zvakare nekupararira kwevhidhiyo yako kuti iwedzere maitiro ayo. Ini ndinoda kuti ivo vanogovana email uye email masiginecha senzvimbo huru yekusimudzira vhidhiyo yako. Imwe yekuparadzira sosi inobatwa zvishoma ndeye Youtube uye yekutsvagisa injini. Usakanganwa kuti kune nzira mbiri dzinogona kukanganisa kutsvaga kana iwe uchishambadzira kuburikidza nevhidhiyo:
Vhidhiyo Kutsvaga - Youtube ndiyo yechipiri injini yekutsvaga uye iwe unogona kunongedza yakawanda traffic kudzoka kune yako brand kana kumhara mapeji ekushandurwa. Zvinoda zvimwe optimization yewako Youtube vhidhiyo kutumira, zvakadaro. Makambani akawandisa anopotsa pane izvi!
Zvemukati Chikamu - Pane yako saiti, kuwedzera vhidhiyo kuchinhu chakanyatsogadziriswa, chakadzama chinyorwa chinogona kuvandudza zvakanyanya mikana yako yekuverengerwa, kugovaniswa, uye kutaurwa kwazviri.
Heano akazara infographic nerumwe ruzivo rwakakura!
Tags: mwero wekushandurwaemail vhidhiyoKubatanaakakosha mavhidhiyo metricsei kutichiyero roiRoyivhidhiyo mutengovideo distributionvhidhiyo emailvhidhiyo mhindurovhidhiyo kushambadziravhidhiyo kushambadzira mushandirapamwemavhidhiyo metricskuronga vhidhiyovhidhiyo roivhidhiyo kugovanavhidhiyo siginechamavhidhiyo manhambamaonero ekuverengaYouTube